I-china eyandisiweyo yokuphefumla isekethe ye-swivel catheter Mount mveliso kunye nabathengisi | Biotek
Ukwandiswa Ukuphefumla kweSekethe yokujikeleza i-Catheter Mount
isixhobo sokudibanisa esisetyenziswa kwiisekethe zokuphefumla ezinesiphelo esinye sesigulana kunye nesiphelo somatshini. Isetyenziswa kwisekethe yokuphefumla, inkqubo yokubulala i-anesthesia, njl.njl. Isetyenziselwa ubukhulu becala ukuba bhetyebhetye kwisekethe kwaye kuthintele ukucofa isekethe kunye nokuNqandwa kweesekethe. Iyakwandisa kwaye iyabamba endaweni yayo yesiqhelo. Umzimba wesikhanyisi ubotshiwe ukuze wandise kwaye ungqubane kwaye unokugcina njengoko kufuneka. Ukudibanisa kunye nokunciphisa ubude be-catheter mount kunciphisa indawo efileyo yesekethe yokuphefumla kwesigulana. Isetyenziswa kwindawo yokusebenza yeanesthesia nakwimeko yokuphefumla
Ikhowudi yemveliso: BOT 126000
Isetyenziselwa ukudibanisa isixhobo sokuphefumla ngexesha lokubulala iintlungu.
Umzekelo: i-corrugated, i-smoothbore kunye nokwandiswa okukhoyo.
1.Ultimate ubhetyebhetye ngexesha lokusebenza kunye neenkqubo zeklinikhi xa ukuqhuba kwesigulana kunokufuneka;
Uluhlu olubanzi lwe-2 engqinibeni okanye ezijikelezayo ezijikelezayo kunye okanye ngaphandle kwezibuko ezibonelela ngokuguquguquka kolawulo lomoya womoya kwizigulana kuzo zonke iimeko zeklinikhi;
I-3.22F okanye i-15MM yokuphelisa izihlanganisi ukuze zikhuseleke ngokufanelekileyo kuzo zonke iziqwenga ze-Y zihlangabezana nemigangatho evunyiweyo.
-Iinjongo zentaba ye-catheter kukunciphisa ukutsala kwityhubhu ye-endotracheal okanye imaski yokugcoba ngokudlulisela ubunzima benkqubo yokuphefumla kude nesigulana.
Iindidi zeTyhubhu: incence, iyandiswa kwaye igudile
Iindidi zesinxibelelanisi: Ingqiniba, ukujija kabini kunye okanye ngaphandle kwe-Elastometic cap, luer-lock ect.
- Ifanelekile ekusebenziseni i-anesthesia, yokuphefumla kunye neyokuhlaziya.
- Yiba nobukhulu obahlukeneyo, olulungele abantwana kunye nabantu abadala
Malunga nolawulo lomgangatho
Umgangatho bubomi mveliso wethu. Sinomhloli kwizithuba ezahlukeneyo, kwaye kukho abahloli abaliqela ngaphambi kokupakisha ukufumana iimveliso ezisemgangathweni.
Malunga nendawo yomzi-mveliso kunye nokutyelela kumzi-mveliso
Umzi-mveliso weBiotek ubekwe kwisixeko saseNanchang, kwiPhondo laseJiangxi, China. Imalunga neyure enye ngenqwelomoya okanye iiyure ezi-3 ngololiwe ohamba ngesantya esiphezulu esuka eShanghai, Singakuthatha xa ufuna,
Egqithileyo Izinto zoNyango lwezoNyango i-100ml 150ml 200ml iPca kunye ne-CBI yePompo yokuPhulukiswa
Okulandelayo: Intengiso eshushu I-Hme filter anesthesia kunye nenkqubo yokuphefumla